Jowhar.com - Somali news Leader - News: Madaxweyne Xasan Sheekh oo maanta magacaabay Golaha Ammaanka Qaranka (Sawirro)
December 13 2013 06:18:29
Madaxweyne Xasan Sheekh oo maanta magacaabay Golaha Ammaanka Qaranka (Sawirro)
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ku dhawaaqay in la aas aasay Golaha Amniga Qaranka Soomaaliyeed oo leh Xogheyn gaar ah, iyadoo xubno ay ka yihiin Hey'adaha ammaanka iyo Garsoorka.
Golaha Amniga qaranka ayaa bedelaya Gudigii Amniga Qaranka ay lahaayeen dowladihii KMG, iyadoo ku dhawaaqista Golahan ay ku soo aaday, iyadoo dowladda Soomaaliya ay tahay mid rasmi ah.
Madaxweynaha oo ka hadlay furitaanka shirkii u horeeyay ee maanta ay yeesheen Golaha Amniga Qaranka ayaa sheegay in hey'adan ay tahay tan ugu sareysa qaranka ee dejineysa siyaasada iyo istiraatiijiyada dhinaca ammaanka.
"Golaha Amniga Qaranka Soomaaliyeed waa hay�adda ugu sareysa Qaranka oo dajineysa Siyaasadda iyo Istraatiijiyada Amniga Qaranka Soomaaliyeed si loo sugo amniga iyo xaquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed oo ay ugu horreyso amniga rayidka, gaar ahaan haweenka iyo carruurta Soomaaliyeed"ayuu yiri Madaxweynaha Soomaaliya.
Golaha Amniga Qaranka ayaa waxaa gudoomiye u ah Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, waxaa xubin ka ah Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya, Wasiirada Arrimaha Gudaha, Gaashaandhiga, Maaliyada, Arrimaha Dibvada iyo Garsoorka, waxaana xubno farsamo ka ah Taliyeyaasha ciidamada xooga dalka, Nabadsugida, Booliska iyo Asluubta. Golaha Amniga Qaranka Soomaaliyeed ayaa Todobaadkiiba mar lagu wadaa inay kulmaan oo ay dejiyaan Istraatejiyada iyo siyaasadda Amniga Dalka. Xogheyntana laga sugayaa inay xiriirka iyo dhaqangelinta go�aanadda dabagal ku sameeyaan.
Magacaabista Golaha Amniga qaranka ayaa ku soo beegmaya, iyadoo mudooyinkii u dambeeyay habac-sanaan dhinaca ammaanka ah uu ka jiray gobolada dalka, gaar ahaan Caasimada magaalada Muqdisho
master on August 27 2013
0 Comments · 7344 Reads
jowhar.com3,188,962 unique visits